စကျရုံပိုငျရှငျ သူငယျခငျြးက Delivery လိုကျပို့နလေို့ မေးကွညျ့လိုကျသောအခါ – Daily Feed MM
Admin_John | May 16, 2020 | Knowledge | No Comments
လုပျငနျးရှငျ သူငယျခငျြးတဈယောကျရဲ့ ဇနီး အှနျလိုငျးမှာ ဟငျးခကျြရောငျးပွီး သူငယျခငျြးက သူ့ကားနဲ့ Delivery လိုကျပို့နတေယျ။ တဈရကျ သူပစ်စညျးလာပို့တဲ့ တိုကျအောကျမှာ ကြှနျတျောနဲ့ ဆုံတယျ..။
“မငျးကှာ..စကျရုံပိုငျရှငျကွီးဖွဈနပွေီး ဒါတှေ လုပျနတောလား” ဆိုပွီးနောကျတော့သူက အတညျပွနျဖွတေယျ. “လူတှကေ လကျလုပျလကျစားတှေ ဒုက်ခရောကျကွတာပဲ မွငျတာကှ.. ငါတို့လို လုပျငနျးရှငျတှေ အကွီးအကယျြ ထိတာကိုကြ သိပျမသိဘူး. ဆငျပိနျ ကြှဲလောကျပေါ့ကှာဆိုပွီး ပွောကွတယျ..”
“မဟုတျဘူးသူငယျခငျြး.. တကယျ့ကို အလုပျကောငျးမယျ့ သင်ျကွနျကာလကိုမြှျောလငျ့ပွီး ငါ ဘဏျတိုးနဲ့ လုပျငနျးခြဲ့ထားတာတှေ အတှကျ တဈလ တဈလကို သိနျး လေးငါးဆယျ မိုငျးနပျရှိတယျ သူငယျခငျြး..
အလုပျတှေ လုံးဝကို အကုနျရပျကုနျပွီ.. ဒါတငျပဲလား ဆိုတော့ မဟုတျသေးဘူး… အလုပျတှေ ပွနျကောငျးသှားရငျ ဝုနျးခနဲ ပွနျစလို့ရအောငျ တဈခြို့ ဝနျထမျးတှကေို လစာ ပေးထားရသေးတယျ.. ”
“ဒီအခွအေနမှော ငါတို့တဈခုခုမှ ထ မလုပျလို့ကို မရဘူး.. ပွီးတော့ ဒီအခြိနျမှာ ဈေးရောငျးတာတို့ Delivery လုပျတာတို့ကို ပျေါပငျဆိုပွီးပွောကွတယျ..
ဒါဆို ငါ့ကို အကွံပေး ပွောစမျးကှာ… တဈခွားအလုပျ..ဘာလုပျရမလဲ.. ဘာမှ မရှိဘူးကှ..သူငယျခငျြးရ.. တဈကမ်ဘာလုံး စားသောကျကုနျ အှနျလိုငျးရှော့ပငျနဲ့ Delivery ပွောငျးလုပျနကွေတာ.. ”
“အလုပျမကောငျးလို့ ထိုငျနကွေတာခငျြးအတူတူ လုပျငနျးရှငျဆိုသူ အမြားစုမှာ အတိုးက တရိပျရိပျတကျနဟေ..
ဒီကှမှေ့ာ ဒီတကျနဲ့ မလှျောရငျ ငါတို့ကနျြခဲ့မှာ..ရိုးရိုးမကနျြခဲ့ဘူးနျော.. ဘဝပကျြပွီး ကနျြခဲ့မှာကှ.. ခဏစောငျ့အုံးကှာ..ပွောစရာစကားမကုနျသေးဘူး.. နလေ့ညျစာအမှီ သှားပို့လိုကျအုံးမယျ.. ၇ လှာ တကျရမှာကှ..”
လှုပျလီလှုပျလဲ့နဲ့ တိုကျပျေါတကျသှားတဲ့ သူ့ကို အောကျကနေ စောငျ့နလေိုကျတယျ.. ခဏနတေော့ သူပွနျဆငျးလာတယျ.. နဖူးမှာတငျနတေဲ့ ခြှေးကိုသုတျပွီး စကားဆကျတယျ.. “ကွညျ့တဲ့ အမွငျတှေ အမြိုးမြိုးကှဲတာပေါ့.. ဒီအလုပျမြိုးဆိုတာ နှမျးပါးတဲ့ သူတှလေုပျပါစပေေါ့.. နှမျးပါးတဲ့သူ စီးနတေဲ့ စကျဘီးက သူ့ပိုကျဆံနဲ့သူ ဝယျထားတာ..
ငါတို့ လုပျငနျးရှငျဆိုသူ အမြားစုဟာ အိမျ ကား လကျရှိသုံးနတေဲ့ အသုံးအဆောငျ အားလုံးနီးပါးကို ဘဏျက အကွှေးနဲ့ သိမျးပဈလို့ ရတယျကှ…”
“အပျေါယံကိုကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျရငျတော့ ငါတို့က ခမျြးသာတယျပေါ့.. ပေးရမယျ့အကွှေးကို အကုနျရောငျးပွီး ခုခကျြခငျြးဆပျရမယျဆို မှဲသှားမယျ့ သူဌေးတှေ ပတျဝနျကငျြမှာ လကျညှိုးထိုးမလှဲဘူးကှ..
ဒီအခြိနျက ဆငျးရဲသူ ခမျြးသာသူမရှေး အကုနျ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ အခြိနျ.. ပွီးတော့ မလှယျတဲ့ အခကျြရှိပါသေးတယျ..”
“ငါတို့ အနအေထားကွီးနဲ့ကှာ ဘယျဈေးရောငျးခငျြပါ့မလဲ.. ဘယျ ကိုယျတိုငျလိုကျပို့ခငျြပါ့မလဲ.. သူဌေးကှ.. သူဌေးလို နခေဲ့ ထိုငျခဲ့ သူမြားကို ခိုငျးခဲ့တာကှ.. မငျးက ငါဒီအလုပျလုပျလို့ အံ့သွတယျ..
ငါကကြ အဲဒီ မာနျကွီးခံနပွေီး ခုခြိနျထိ ဘာမှ ထ မလုပျတဲ့ သူတှကေိုပဲ အံ့သွတာ.. ဘယျသူတှေ ဘာပွောပွော ငါကတော့ ငါ့ကိုယျငါရော ၊ ငါ့မိနျးမကိုရော ခြီးကြူးတယျ.. အလုပျကွီးကွီး သေးသေး သမ်မာ အာဇီဝ အလုပျဖွဈလို့ မရှကျ မကွောကျ လုပျရဲတာကိုပဲ ငါမွငျတယျ..”
သူငယျခငျြးနဲ့ အတျောကွာ စကားပွောပွီးတဲ့နောကျ ရငျထဲမှာ အတှေးတှေ အပွညျ့နဲ့ ကြှနျတျော အိမျကိုပွနျလာခဲ့တယျ။ သူငယျခငျြးကတော့ နောကျတဈနရောကို ပစ်စညျးပို့ဖို့ လှုပျလီ လှုပျလဲ့နဲ့ ကားပျေါပွနျတကျသှားလရေဲ့…။
လုပ်ငန်းရှင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီး အွန်လိုင်းမှာ ဟင်းချက်ရောင်းပြီး သူငယ်ချင်းက သူ့ကားနဲ့ Delivery လိုက်ပို့နေတယ်။ တစ်ရက် သူပစ္စည်းလာပို့တဲ့ တိုက်အောက်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ ဆုံတယ်..။
“မင်းကွာ..စက်ရုံပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်နေပြီး ဒါတွေ လုပ်နေတာလား” ဆိုပြီးနောက်တော့သူက အတည်ပြန်ဖြေတယ်. “လူတွေက လက်လုပ်လက်စားတွေ ဒုက္ခရောက်ကြတာပဲ မြင်တာကွ.. ငါတို့လို လုပ်ငန်းရှင်တွေ အကြီးအကျယ် ထိတာကိုကျ သိပ်မသိဘူး. ဆင်ပိန် ကျွဲလောက်ပေါ့ကွာဆိုပြီး ပြောကြတယ်..”
“မဟုတ်ဘူးသူငယ်ချင်း.. တကယ့်ကို အလုပ်ကောင်းမယ့် သင်္ကြန်ကာလကိုမျှော်လင့်ပြီး ငါ ဘဏ်တိုးနဲ့ လုပ်ငန်းချဲ့ထားတာတွေ အတွက် တစ်လ တစ်လကို သိန်း လေးငါးဆယ် မိုင်းနပ်ရှိတယ် သူငယ်ချင်း..
အလုပ်တွေ လုံးဝကို အကုန်ရပ်ကုန်ပြီ.. ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး… အလုပ်တွေ ပြန်ကောင်းသွားရင် ဝုန်းခနဲ ပြန်စလို့ရအောင် တစ်ချို့ ဝန်ထမ်းတွေကို လစာ ပေးထားရသေးတယ်.. ”
“ဒီအခြေအနေမှာ ငါတို့တစ်ခုခုမှ ထ မလုပ်လို့ကို မရဘူး.. ပြီးတော့ ဒီအချိန်မှာ ဈေးရောင်းတာတို့ Delivery လုပ်တာတို့ကို ပေါ်ပင်ဆိုပြီးပြောကြတယ်..
ဒါဆို ငါ့ကို အကြံပေး ပြောစမ်းကွာ… တစ်ခြားအလုပ်..ဘာလုပ်ရမလဲ.. ဘာမှ မရှိဘူးကွ..သူငယ်ချင်းရ.. တစ်ကမ္ဘာလုံး စားသောက်ကုန် အွန်လိုင်းရှော့ပင်နဲ့ Delivery ပြောင်းလုပ်နေကြတာ.. ”
“အလုပ်မကောင်းလို့ ထိုင်နေကြတာချင်းအတူတူ လုပ်ငန်းရှင်ဆိုသူ အများစုမှာ အတိုးက တရိပ်ရိပ်တက်နေဟ..
ဒီကွေ့မှာ ဒီတက်နဲ့ မလှော်ရင် ငါတို့ကျန်ခဲ့မှာ..ရိုးရိုးမကျန်ခဲ့ဘူးနော်.. ဘဝပျက်ပြီး ကျန်ခဲ့မှာကွ.. ခဏစောင့်အုံးကွာ..ပြောစရာစကားမကုန်သေးဘူး.. နေ့လည်စာအမှီ သွားပို့လိုက်အုံးမယ်.. ၇ လွှာ တက်ရမှာကွ..”
လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ တိုက်ပေါ်တက်သွားတဲ့ သူ့ကို အောက်ကနေ စောင့်နေလိုက်တယ်.. ခဏနေတော့ သူပြန်ဆင်းလာတယ်.. နဖူးမှာတင်နေတဲ့ ချွေးကိုသုတ်ပြီး စကားဆက်တယ်.. “ကြည့်တဲ့ အမြင်တွေ အမျိုးမျိုးကွဲတာပေါ့.. ဒီအလုပ်မျိုးဆိုတာ နွမ်းပါးတဲ့ သူတွေလုပ်ပါစေပေါ့.. နွမ်းပါးတဲ့သူ စီးနေတဲ့ စက်ဘီးက သူ့ပိုက်ဆံနဲ့သူ ဝယ်ထားတာ..
ငါတို့ လုပ်ငန်းရှင်ဆိုသူ အများစုဟာ အိမ် ကား လက်ရှိသုံးနေတဲ့ အသုံးအဆောင် အားလုံးနီးပါးကို ဘဏ်က အကြွေးနဲ့ သိမ်းပစ်လို့ ရတယ်ကွ…”
“အပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ ငါတို့က ချမ်းသာတယ်ပေါ့.. ပေးရမယ့်အကြွေးကို အကုန်ရောင်းပြီး ခုချက်ချင်းဆပ်ရမယ်ဆို မွဲသွားမယ့် သူဌေးတွေ ပတ်ဝန်ကျင်မှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲဘူးကွ..
ဒီအချိန်က ဆင်းရဲသူ ချမ်းသာသူမရွေး အကုန် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်.. ပြီးတော့ မလွယ်တဲ့ အချက်ရှိပါသေးတယ်..”
“ငါတို့ အနေအထားကြီးနဲ့ကွာ ဘယ်ဈေးရောင်းချင်ပါ့မလဲ.. ဘယ် ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ချင်ပါ့မလဲ.. သူဌေးကွ.. သူဌေးလို နေခဲ့ ထိုင်ခဲ့ သူများကို ခိုင်းခဲ့တာကွ.. မင်းက ငါဒီအလုပ်လုပ်လို့ အံ့သြတယ်..
ငါကကျ အဲဒီ မာန်ကြီးခံနေပြီး ခုချိန်ထိ ဘာမှ ထ မလုပ်တဲ့ သူတွေကိုပဲ အံ့သြတာ.. ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ငါကတော့ ငါ့ကိုယ်ငါရော ၊ ငါ့မိန်းမကိုရော ချီးကျူးတယ်.. အလုပ်ကြီးကြီး သေးသေး သမ္မာ အာဇီဝ အလုပ်ဖြစ်လို့ မရှက် မကြောက် လုပ်ရဲတာကိုပဲ ငါမြင်တယ်..”
သူငယ်ချင်းနဲ့ အတော်ကြာ စကားပြောပြီးတဲ့နောက် ရင်ထဲမှာ အတွေးတွေ အပြည့်နဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းကတော့ နောက်တစ်နေရာကို ပစ္စည်းပို့ဖို့ လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့နဲ့ ကားပေါ်ပြန်တက်သွားလေရဲ့…။
ကိုဗဈပြောကျပွီးရငျ နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ ဒီအကြိုးဆကျတှေ ဖွဈပါတယျ